I-Webinar: I-COVID-19 neRetail - Amasu Asetshenziswayo Okukhulisa Ukutshalwa Kwakho Kwezimali Zokukhangisa | Martech Zone
Akungabazeki ukuthi imboni yezentengiselwano ichithwe ubhubhane lwe-COVID-19. Njengamakhasimende we-Marketing Cloud, nokho, unamathuba abangenayo izimbangi zakho. Ubhadane selusheshise ukwamukelwa kwedijithali futhi lezo zimilo zizoqhubeka nokukhula njengoba umnotho usimama. Kule webinar, sizohlinzeka ngamasu ama-3 abanzi nezinhlelo ezi-12 ezikhethekile kuzo ukuthi inhlangano yakho kufanele ibeke phambili namuhla - hhayi nje ukusinda kule nkinga kepha ukuze ichume ngonyaka ozayo.
NgeSalesforce kanye Ama-Marketing we-Marketing inqwaba yamapulatifomu namathuluzi, amakhasimende abo anethuba elingcono kakhulu lokubhekana nalesi siphepho sezomnotho. Highbridge isazi soguquko kwidijithali (futhi Martech ZoneUmsunguli) Douglas Karr kuzokusiza ukuvuthisa ukumaketha kwakho kwedijithali futhi kuguqule ukusetshenziswa kwenkampani yakho kwefu lokukhangisa ukukhulisa ukutholwa, ukwakha inani lamakhasimende, nokugcina amakhasimende abalulekile.
Kule webinar, sizohlinzeka ngamasu aqondile ayi-12 azokusiza ukuthi unciphise izindleko zakho ngokutholwa nokuguqulwa ngakunye, ukwenyuse imali engenayo ngokuzibandakanya ngakunye, futhi wandise imizamo yakho yonke yezentengiso yedijithali. Ngokuhambisana ne-webinar, sizohlinzeka abazoba khona ngohlu lokuhlola oluhambisana nezinsizakusebenza ukuze usendleleni.
Idatha - imizamo yokuhlanza, ukuphinda kabili, ukuqondanisa nokwenza ngcono idatha yakho ngaphakathi kwe-Marketing Cloud ukunciphisa imfucuza nokwandisa ukusebenza.
Delivery - izinhlelo zokwakha nokuthumela imiyalezo ebhokisini lokungenayo, ukugwema izihlungi ze-junk nokukhomba izingqinamba ezithile ze-ISP.
Yenza ngokwezifiso - imizamo yokuhlukanisa amathemba akho namakhasimende, hlunga futhi ukhombe imikhankaso yakho, futhi wenze ukuxhumana kube ngokwakho.
test - imizamo yokukala, ukuhlola, nokwandisa ukuxhumana kwakho kwezokumaketha kweziteshi eziningi.
Intelligence - qonda ukuthi u-Einstein ubasiza kanjani abathengisi ukuthola, ukuqagela, ukuncoma, kanye nokuzenzela ukuxhumana kwabo kwezentengiso.
Highbridge unezihlalo ezimbalwa ezisele ngaphandle kwamakhasimende abo - ngakho-ke uma unentshisekelo, sicela ubhalise ngokushesha:
Ubani Okufanele Afike:
Abakhangisi banentshisekelo yokuqonda ukuthi i-Marketing Cloud ingayishayela kanjani imali yenhlangano yakho yokuthengisa noma ye-e-commerce.
Abakhangisi abasebenzise i-Marketing Cloud kodwa bangathanda ukuba nobucayi ngokwengeziwe ekuhlukaneni kwabo, ukwenza ngezifiso kwabo nokwenza kwabo okuhle.
Abakhangisi asebenzise i-Marketing Cloud kodwa bangathanda ukufaka ohambweni lwamakhasimende olusezingeni eliphezulu kanye nokuhlola emizamweni yabo.
Abakhangisi asebenze uhambo lwamakhasimende futhi bangathanda ukusebenzisa ubuhlakani bokuzenzela ukwenza kangcono lolo hambo.
Ithimba lobuholi e Highbridge babe neminyaka engaphezu kwengama-40 ngokuhlanganyela kobuholi obuphezulu beqhinga embonini yezokuthengisa. Amaklayenti abo amakhulu afaka phakathi uDell, Chase Paymentech, kanye neGoDaddy… kepha basize amakhulu ezinhlangano ukwakha imephu yomgwaqo ukuguqula izinhlangano zabo ngamadijithi. Ngaphandle, zisiza izinkampani ukuguqula ulwazi lwamakhasimende. Ngaphakathi, zisiza izinkampani ukuzenzekelayo, ukuhlanganisa, nokwandisa amapulatifomu abo ukudala isikhathi sangempela, ukubuka kwe-360-degree kwamakhasimende abo.
Thuthukisa i-iTunes Podcast yakho nge-Smart App Banner